Agrochemical, Fanaraha-maso ny lalitra, Veterinary, famonoana bibikely
Manam-pahaizana manokana amin'ny fanondranana famonoana bibikely ao an-tokantrano, Pesticides, Veterinary, Fanaraha-maso ny lalitra, API & mpanelanelana
Hebei Senton dia matihanina orinasa ara-barotra iraisam-pirenena ao Shijiazhuang.Major raharaham-barotra ahitana ny trano famonoana bibikely, famonoana bibikely, Veterinary, Fly Control, API & Intermediates. Ny vokatra dia manomboka amin'ny akora ka hatramin'ny vokatra vita, manomboka amin'ny formulas tokana ka hatramin'ny formulas mifangaro. Ny vokatra dia azo namboarina araka ny fepetra takian'ny mpanjifa mba hihaona amin'ny filàna fividianana isan-karazany. Nanolo-tena izahay hanome ny vokatra mety indrindra sy ny serivisy tsara indrindra mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa.
Fitakiana maneran-tany ho an'ny paraquat...
Rehefa nanangana paraquat teny an-tsena ny ICI tamin'ny taona 1962, dia tsy ho noeritreretin'ny olona mihitsy fa ny paraquat dia hiaina fiainana henjana sy henjana toy izany amin'ny ho avy. Ity herbicide tsy mifantina midadasika ity dia voatanisa ao amin'ny lisitry ny herbicide faharoa lehibe indrindra eran-tany. Nahamenatra indray mandeha ny fidinana...
Rizobacter dia namoaka bio-see ...
Vao haingana, Rizobacter dia namoaka Rizoderma, biofungicide amin'ny fitsaboana voan'ny soja any Arzantina, izay misy trichoderma harziana izay mifehy ny otrikaretina holatra amin'ny voa sy ny tany. Matias Gorski, biomanager manerantany ao amin'ny Rizobacter, dia manazava fa Rizoderma dia fungicide fitsaboana voa biolojika ...
Chlorothalonil sy fungicide miaro Chlorothalonil sy Mancozeb dia fungicides miaro izay nivoaka tamin'ny taona 1960 ary notaterin'ny TURNER NJ voalohany tamin'ny taona 1960 tany ho any. Ny chlorothalonil dia napetraka teo amin'ny tsena tamin'ny 1963 avy amin'ny Diamond Alkali Co. (namidy tamin'ny ISK Biosciences Corp. any Japana tatỳ aoriana)...